October 5, 2021 sonsonlinlin 0
ညအိပ်ချိန်မှာ ဘရာဇီယာချွတ်အိပ်သင့်သလား ? မိန်းခလေးတိုင်းကို ဖတ်စေချင်ပါတယ် ညအိပ်ချိန်မှာ ဘရာဇီယာချွတ်အိပ်သင့်သလား ? မိန်းခလေးတိုင်းကို ဖတ်စေချင်ပါတယ် မိန်းကလေးအချို့က ဘရာဇီယာကို အချိန်တိုင်း၊အချိန်ပြည့် ဝတ်ထားရတာကိုပဲ သက်တောင့်သက်သာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ဘရာဇီယာက ရင်သားတွဲကျခြင်းနှင့် ရင်သားပုံ မကျခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ဖို့ အတွက် အမြဲ ဝတ်ထားသင့်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ညအိပ်တဲ့ အခါမှာတော့ မဝတ်သင့်ပါဘူးနော်။ ညအိပ်တဲ့ အခါမှာ ဘရာဇီယာ ဝတ်အိပ်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက် […]
ငွေကုန်ကြေးကျအနည်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ဆံပင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်း (၅)သွယ်
ငွေကုန်ကြေးကျအနည်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ဆံပင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်း (၅)သွယ် လှပပြီးကျန်းမာတဲ့ဆံကေသာကို ရရှိဖို့အတွက် ဓာတုပစ္စည်းတွေအများကြီးနဲ့ ငွေအများကြီးကုန်ကျစရာမလိုပါဘူး။ သင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေက သင့်ကို အများကြီး ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ငွေကုန်ကြေးကျအနည်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပျိုမေတို့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေမှာပါနော်….။ (၁) ဆံပင်ကိုသဘာဝအတိုင်းဖြောင့်စင်းနေစေမယ့် နည်းလမ်း ကော်မှုန့်အနည်းငယ် ဆံပင်ပေါင်းဆေး ရေအနည်းငယ် ကြက်ဥအနှစ် ကော်မှုန့် ၁ဇွန်းကို ရေသုံးဇွန်းနှုန်း ရောပေးကာ ကော်မှုန့်တွေ ပျော်သွားတဲ့အထိ အပူပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ဆံပင်ပေါင်းဆေးအနည်းငယ်၊ […]
ချစ်စရာကောင်းအောင်စကားပြောနည်း🖤 ရုပ်လေးပဲ ချစ်ဖို့ကောင်းနေ လို့မပြီးပါဘူးကားပြောဆိုရာ တွင်လည်း ချစ်စရာကောင်းအောင်ပြော တတ်ရ ပါတယ်။ ယောက်ကျားများ အသုံးပြု မည်ဆို ပါက တစ်ချို့နည်းများကို သာအသုံး ချရန် (အကုန်သုံးရင် Gay သွားနိုင် 1.နော်…💟 စကားပြောဆိုရာတွင် “နော်” ဟုထည့်သွင်းပြော ဆိုခြင်းက စကားကို နူးညံ့သွားစေ ပါတယ်။ခိုင်းစေသည့် အရာများ/ပူဆာသည့် အရာများတွင် နော်ဟု အသုံးပြုခြင်း ကသင့်တော် ပါတယ်။(ကိုကိုနော် / ကလေးကလည်းနော်) ဟုချွဲနိုင် […]
ေဈးသက္သာတဲ့အစားအေသာက္ေတြကိုသာဝယ္စားၿပီး Makeup ဖိုးအတြက္ေငြစုေနလို႔ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတဲ့မိန္းကေလး
အခုခေတ်မှာ Makeup မလိမ်းတဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုတာ မရှိတော့လောက်အောင်ပါပဲ ။ ထို့အပြင် Makeup သားလှအောင် ၊ အသားအရေမထိခိုက်အောင် ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ Makeup တွေကိုသာ အသုံးများလေ့ရှိကြပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် မိန်းကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့လစာတွေထဲကနေ ငွေတွေစုပြီး Makeup တွေဝယ်စုတတ်လေ့ရှိကြပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း တရုတ်နိုင်ငံက အသက် 26နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးမှာတော့ Makeup တွေကိုဝယ်စုနိုင်ဖို့ သူမရဲ့ကျန်းမာရေးကို အတော်လေးထိခိုက်စေတဲ့ ဈေးသက်သာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုသာ ဝယ်စားပြီး ၊ တစ်ခါတစ်လေ […]
ေလာကမွာ မင္းကို ၿပဳံးျပ တတ္သူထက္ ဆုံးမ တတ္သူ ကို တန္ဖိုးထားပါ
လောကမှာ မင်းကို ပြုံးပြ တတ်သူထက် ဆုံးမ တတ်သူ ကို တန်ဖိုးထားပါ လော ကမှာ မင်းကို ပြုံးပြ တတ် သူ ထက် ဆုံးမတတ် သူက အလွန် နည်းပါ လိမ့် မယ် ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လူတော်တော် များများက အမိုက်ခံပြီး လူတစ်ယောက်ကို ဆုံးမ သွန်သင် ဖို့ ဝန်လေး တတ်ကြတယ် လူတစ်ချို့ ကတော့ […]
မိဘမ်ားက အလြန္ဆူပူေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ကာ အိမ္မွထြက္ေသာ္လည္း မေပးထြက္သျဖင့္ အိမ္ေနာက္တြင္ ကိုယ္တိုင္ေျမေအာက္ခန္းတူးကာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေကာင္ေလး
မိဘများက အလွန်ဆူပူနေသောကြောင့် စိတ်ညစ်ကာ အိမ်မှထွက်သော်လည်း မပေးထွက်သဖြင့် အိမ်နောက်တွင် ကိုယ်တိုင်မြေအောက်ခန်းတူးကာ နေထိုင်ခဲ့သည့်ကောင်လေး မိဘတို့ဆိုသည်မှာ မိမိတို့၏ သားသမီးတို့အပေါ်တွင် အမြဲဂရုတစိုက်ရှိပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့်နှင့် ရှိနေတတ်ကြသည်။ မိဘတို့သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သားသမီးတို့အာ ဆူပူမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း အမုန်းတရားကြောင့် ဆဲဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပေ သားသမီးတို့ကို စေတနာနှင့်သူ ပြောဆိုဆုံးမခြင်းဖြစ်ပေသည်ယခုတွင်လည်း အသက်၁၄နှစ်အရွယ်ရှိ ကောင်ကလေးသည် မိဘများနှင့် စိတ်အခန့်မသင့်ကာ စိတ်ဆိုးသွားခဲ့သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ သူငယ်ချင်းများနှင့် သွားလည်သောကြောင့် အနည်းငယ်ဆူပူခြင်းဖြစ်သည် ကောင်လေးဟာ ဆူပူမှုဒဏ်ကို […]
သစ္စာမရှိတဲ့ ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီ ဆိုတာကို လမ်းမကြီး ဘေးမှာ ဆိုင်းဘုတ်တပ်ပြီး ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
အမျိုးသားတစ်ဦးဟာသူ့ချစ်သူကောင်မလေးကသူ့အားလိမ်လည်လှည့်စားနေတာကိုသိသွားလိုက်ရတဲ့အခါသူမနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်မှု အားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက်အဆိုပါအမျိုးသားဟာသစ္စာမရှိတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနှင့်သူကလမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလူသိထင်ရှားကြော်ငြာဖို့လမ်းသွားလမ်းလာတွေများတဲ့လမ်းမပေါ်ရှိကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုအဆိုပါအသည်းကွဲနေတဲ့အမျိုးသားကြီးကငှါးရမ်းခဲ့ပါတယ်။ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ဌားခဲ့တဲ့အပြင်အဆိုပါအမျိုးသားဟာလော်လန်စက်ဖြင့်လည်းအော်ပြီးကြေငြာခဲ့ပါသေးတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း၎င်းအဖြစ်အပျက်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကsocial mediaပေါ်မှာပျံ့နှံ့သွားကာလူသိများသွားခဲ့ပါတော့တယ်။၁၅ စက္ကန့်ကြာတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ထဲအရအဆိုပါအမျိုးသားနှင့်ချစ်သူကောင်မလေးတို့ဟာကြောငြာဆိုင်းဘုတ်မျက်စာင်းထိုးရဲ့လမ်းဆုံနားမှာနှစ်ယောက်သားဒေါသတကြီးနဲ့စကားများနေခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့နောက်အပြာရောင်ရှပ်င်္အကျီဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်က ထိုစုံတွဲထံချဉ်းကပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုကူပြီးကြိုးစားဖြေရှင်းပေးနေခဲ့ပါတယ်။ အသည်းကွဲတဲ့အခါခံစားရတဲ့နာကျင်မှုကိုနားလည်နိုင်ပေမဲ့လည်းအဆိုပါအမျိုးသားရဲ့လုပ်ရပ်ကလူများစွာကိုအံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူအချို့ကထိုစုံတွဲရဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ခြင်းကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပေမဲ့လူများစွာက၎င်းအဖြစ်အပျက်ဟာလူအများကအာရုံစူးစိုက်အောင်ကြံဖန်လုပ်ဆောင်တယ်လို့လည်းထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့နောက်၎င်းကတကယ့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီးဟန်ဆောင်ထားတာမဟုတ်ကြောင်းအင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးကအခိုင်အမာပြောဆိုနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။အချစ်ကြီးရင်အမြတ်ကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်း အချစ်နဲ့မကင်းတဲ့သူတိုင်းကအသည်းကွဲရင်စိတ်လိုက်မာန်ပါတွေ လုပ်တတ်တာတော့အမှန်ပါ။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာသူ႔ခ်စ္သူေကာင္မေလးကသူ႔အားလိမ္လည္လွည့္စားေနတာကိုသိသြားလိုက္ရတဲ့အခါသူမႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ဆက္သြယ္မႈ အားလုံးကိုျဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္အဆိုပါအမ်ိဳးသားဟာသစၥာမရွိတဲ့သူ႔ရဲ႕ခ်စ္သူေကာင္မေလးႏွင့္သူကလမ္းခြဲလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလူသိထင္ရွားေၾကာ္ျငာဖို႔လမ္းသြားလမ္းလာေတြမ်ားတဲ့လမ္းမေပၚရွိေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုကိုအဆိုပါအသည္းကြဲေနတဲ့အမ်ိဳးသားႀကီးကငွါးရမ္းခဲ့ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ဌားခဲ့တဲ့အျပင္အဆိုပါအမ်ိဳးသားဟာေလာ္လန္စက္ျဖင့္လည္းေအာ္ၿပီးေၾကျငာခဲ့ပါေသးတယ္။ ထုံးစံအတိုင္း၎အျဖစ္အပ်က္ရဲ႕ဗီဒီယိုကလစ္ကsocial mediaေပၚမွာပ်ံ႕ႏွံ႔သြားကာလူသိမ်ားသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။၁၅ စကၠန႔္ၾကာတဲ့ဗီဒီယိုကလစ္ထဲအရအဆိုပါအမ်ိဳးသားႏွင့္ခ်စ္သူေကာင္မေလးတို႔ဟာေၾကာျငာဆိုင္းဘုတ္မ်က္စာင္းထိုးရဲ႕လမ္းဆုံနားမွာႏွစ္ေယာက္သားေဒါသတႀကီးနဲ႔စကားမ်ားေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္အျပာေရာင္ရွပ္အၤက်ီဝတ္ဆင္ထားတဲ့လူတစ္ေယာက္က ထိုစုံတြဲထံခ်ဥ္းကပ္ၿပီးသူတို႔ရဲ႕ျပႆနာကိုကူၿပီးႀကိဳးစားေျဖရွင္းေပးေနခဲ့ပါတယ္။ အသည္းကြဲတဲ့အခါခံစားရတဲ့နာက်င္မႈကိုနားလည္ႏိုင္ေပမဲ့လည္းအဆိုပါအမ်ိဳးသားရဲ႕လုပ္ရပ္ကလူမ်ားစြာကိုအံ့အားသင့္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူအခ်ိဳ႕ကထိုစုံတြဲရဲ႕အဆုံးသတ္လိုက္ျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ေပမဲ့လူမ်ားစြာက၎အျဖစ္အပ်က္ဟာလူအမ်ားကအာ႐ုံစူးစိုက္ေအာင္ႀကံဖန္လုပ္ေဆာင္တယ္လို႔လည္းထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္၎ကတကယ့္အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ၿပီးဟန္ေဆာင္ထားတာမဟုတ္ေၾကာင္းအင္တာနက္အသုံးျပဳသူတစ္ဦးကအခိုင္အမာေျပာဆိုေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။အခ်စ္ႀကီးရင္အျမတ္ႀကီးတယ္လို႔ဆိုတဲ့အတိုင္း အခ်စ္နဲ႔မကင္းတဲ့သူတိုင္းကအသည္းကြဲရင္စိတ္လိုက္မာန္ပါေတြ လုပ္တတ္တာေတာ့အမွန္ပါ။ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာသူ့ချစ်သူကောင်မလေးကသူ့အားလိမ်လည်လှည့်စားနေတာကိုသိသွားလိုက်ရတဲ့အခါသူမနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်မှု အားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက်အဆိုပါအမျိုးသားဟာသစ္စာမရှိတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနှင့်သူကလမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလူသိထင်ရှားကြော်ငြာဖို့လမ်းသွားလမ်းလာတွေများတဲ့လမ်းမပေါ်ရှိကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုအဆိုပါအသည်းကွဲနေတဲ့အမျိုးသားကြီးကငှါးရမ်းခဲ့ပါတယ်။ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ဌားခဲ့တဲ့အပြင်အဆိုပါအမျိုးသားဟာလော်လန်စက်ဖြင့်လည်းအော်ပြီးကြေငြာခဲ့ပါသေးတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း၎င်းအဖြစ်အပျက်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကsocial […]
“မ်က္ႏွာေလး ဝင္းမႊတ္ေနဖို႔ ပိုက္ဆံမကုန္တဲ့ ေပါင္းတင္နည္းေလးပါ”
“မျက်နှာလေး ဝင်းမွှတ်နေဖို့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ ပေါင်းတင်နည်းလေးပါ” အလှပြင် ပစ္စည်းတွေကို ကုန်စုံဆိုင်တွေ အလှပြင် ဆိုင်တွေမှာ တကူးတက ရှာစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေဟာ အလှအပ ပစ္စည်းတွေပါပဲ။ အမျိုးသမီးတိုင်း နူးညံ့ပြီး လှပစိုပြေတဲ့ အသားရေမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။သိပ်သေချာတာပေါ့။ အသားအရေကိုနုပျို စိုပြေစေဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဒီကနေ့မှာ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အရမ်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး […]
ဆေးရုံမှာဘဲ လက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက် နာရီအနည်းငယ် အကြာမှာ ကွယ်လွန် သွားခဲ့တဲ့ သတို့သမီး
ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေမှာ သတို့သားနဲ့သတို့သမီးက ရှေ့ဆက်မယ့်သူတို့ဘဝအတွက် “ကောင်းအတူ ဆိုးအတူ ၊ချမ်းသာဆင်းရဲအတူ၊ကျန်းမာပျှော်ရွှင်စွာနဲ့အတူတူ ဖြတ်သန်းသွားကြမယ်”စတဲ့စကားတွေ ကတိသစ္စာပြုကြတာကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုမင်္ဂလာစုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ကိုတော့ ကံတရားကြီးကမျက်နှာသာမပေးခဲ့ပါဘူး။ အခုအဖြစ်အပျက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Connecticutပြည်နယ် Hartfordမြို့ St. Francis ဆေးရုံမှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့တာပါ။အသက် ၃၅နှစ်အရွယ် David Mosherအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားနဲ့ သူ့ချစ်သူအသက် ၃၂နှစ်အရွယ် Heather Lindsayတို့ဟာ မကြာခင်က ဆေးရုံခန်းထဲမှာ ချစ်ခြင်းထုံးဖွဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့မင်္ဂလာပွဲဓာတ်ပုံတွေဟာ onlineမှာ ပျံ့နှံ့သွားလေခဲ့ပါတယ်။ Davidဟာ ၂၀၁၈ခုနှစ် […]
ယောကျာ်းများအတွက် အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ စားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာများနှင့် မစားသင့်တဲ့အစားအစာများ
အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်ခြင်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညဘက်မှာ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်မှသာလျှင် တစ်နေ့ခင်းလုံး လန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညဘက်မှာ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ခြင်း (သို့) တစ်ညလုံး အိပ်လို့မရဘဲ လူးလိမ့်နေရခြင်းသည် သင် ညအိပ်ရာ မဝင်ခင်မှာ စားသုံးတဲ့အစားအစာတွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်ချင်တဲ့ ယောကျာ်းများအတွက် ညအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ စားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာများနဲ့ မစားသင့်တဲ့အစားအစာအချို့ကို ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်။ မစားသင့်တဲ့အစားအစာများကတော့ အသားညှပ် ချိစ်ဘာဂါ cheese burger […]